Home Ulo oru Europe Edin Dzeko Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Diamond nke Bosnian". Edin Edin Dzeko Anyị Ederede Akụkọ ya na akụkọ na-adịghị agwụ aghara Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya dị iche iche, mana ole na ole na-ele Edin Dzeko's Bio nke dị ezigbo ụtọ. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Edin Dzeko Ụmụaka Akụkọ Karịa Ihe Ndị Na -Ndụ mbido
A mụrụ Edin Dzeko n'ụbọchị 17th nke March 1986 na Sarajevo, Bosnia na Herzegovina. A mụrụ ya na nne ya, Belma Džeko na nna, Midhat Džeko.
Akụkọ Edin Džeko bụ nwata bụ akụkọ kachasị mma na obi ike. Ọ bụ akụkọ banyere nwatakịrị nwoke nke gbawara n'olulu égbè iji mee ka ọ daba n'elu ụwa football. Ọ bụrụ na ọ bụghị nne ya Belma, bụ onye kwụsịrị obere nwa ya nwoke na-aga na-egwu bọlbụ n'ọhịa nke na-egbu bọmbụ na nkeji ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, anyị agatụghị ahụ Edin Džeko ka o weghaara ubi ahụ ma ọ bụ gbaa akaebe ya nye Chelsea FC . Ihe merenụ mere n'oge agha nke Balkan.
Ọ na-alaghachi na 1992, Agha Bosnia nke Onwe ya nke gbasara site na afọ atọ ruo 1995. Ọ bụ otu n'ime akụkụ ndị kasị njọ na akụkọ ihe mere eme nke Balkan dị ka ndị Serbia na ndị Croat na-alụ ọgụ megide agbụrụ. Sarajevo, isi obodo Bosnian na Herzegovina na obodo ya na Edin Džeko bụ otu n'ime ebe kachasị njọ nke agha ahụ. Ọ gbalịsiri ike maka ndụ dị ka nwatakịrị ma mee ka ọ bụrụ aha ndị a kacha mara amara na ndị òtù football.
Edin Dzeko Ụmụaka Akụkọ Karịa Ihe Ndị Na -Ndụ mmekọrịta
Na 31 March 2014 DVeko lụrụ enyi ya nwaanyị bụ Amra Silajdžić onye bụ onye Bosnian na onye na-eme ihe nkiri. Ọ bụ afọ abụọ toro ya.
Amra ama ekedi n̄wan emi ekedide akparawa ukpepn̄kpọ Serbia, Vladimir Vičijentijević, emi enye ekenyenede eyen isua 14, Sofia. Ha abụọ ghọtara na ezigbo ịgba alụkwaghịm dị mma karịa alụmdi na nwunye na-adịghị mma ma onye ọ bụla na-aga.
Amre Silajdžić na Edina Džeke na-ahụ n'anya na-amalite na 2012 mgbe ọ nọ na Manchester City. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ, ha kwuru banyere mmekọrịta ha, ha gbara nkịtị, ha kwusakwara mmekọrịta ha site n'ịkekọrịta foto na Twitter.
Na February 2016, ọ ghọrọ nna nwa agbọghọ aha ya bụ Una. A mụrụ nwa ya nke abụọ, nwa nwoke aha ya bụ Dan, na September 2017.
Edin Dzeko Ụmụaka Akụkọ Karịa Ihe Ndị Na -Ndụ Ezinụlọ
Edin Dzeko kwuru na ezinụlọ ya na-akwado ya n'oge niile ọ na-arụ ọrụ, karịsịa nna ya, bụ onye kuru ya gaa ọzụzụ mgbe ọ nọ na Željezničar.
Papa ya na-egwuri egwu na Bosnia na Herzegovina. A na-ewere Džeko Snr ka ọ bụrụ superstar na Sarajevo.
SISTER: Merima Džeko bu nwanyi nke Edin Dzeko. Ọ bụghị naanị nwanne ya, kamakwa ọ bụ enyi ya kachasị bụrụ enyi ka ha abụọ nọkọtara ọnụ oge ha na-etolite.
N'okpuru ebe a bụ ngosipụta nke eziokwu ahụ bụ na Edin na Merima bụ ndị kasị mma pals.
Ewere foto n'elu na Bosnia.
Edin Dzeko Ụmụaka Akụkọ Karịa Ihe Ndị Na -Personality
Anyị achọpụtawo Edin Dzeko nwere àgwà ndị na-esonụ maka ọdịdị ya.
Ike Edin Dzeko: Ọ bụ ọmịiko, nkà, ọgụgụ isi, dị nwayọọ, maara ihe ma dị egwu.
Ọdịdị Edin Dzeko: Edin nwere ike ịtụ egwu, tụkwasị obi kpamkpam, mgbe ụfọdụ ọ na-ewute obere ihe ma nwee ọchịchọ ịgbanahụ eziokwu.
Ihe Edin Dzeko nwere mmasị: Ịnọ naanị, ihi ụra, egwu, mmekọrịta ịhụnanya, mgbasa ozi ndị na-ahụ anya na isiokwu ime mmụọ
Ihe Edin Dzeko achọghị: Mara ya nile, na a na-akatọ ya, oge gara aga na-alọghachi iji hụ ya na obi ọjọọ ọ bụla dịka ọ hụworo na agha Bosnia.
N'ikpeazụ, Edin Dzeko nwere ezigbo enyi ma na-ahụkarị na ụlọ ọrụ dị iche iche. Ọ na-adịghịkwa achọ ọdịmma onwe ya, na-adị njikere mgbe nile inyere ndị ọzọ aka, n'enweghị olileanya na ha ga-enwetaghachi ihe ọ bụla. Uche nke uche ya na achikota ya.
Edin Dzeko Ụmụaka Akụkọ Karịa Ihe Ndị Na -Na-agbapụ Ala
Edin Dzeko nwere ugwo anya ka ọ kwatuo obere mkpirisi onye ọkpụkpọ na-eme ka ya na Gris na Gris nke mere n'afọ 2016. Onye ụkọchukwu Bosnia-Herzegovina ahụchala ọbara ọbara mgbe a hapụrụ ya.
Ihe merenụ mere n'oge ikpeazụ 10 minit nke asọmpi World Cup mgbe Dzeko na-eduzi 1-0. Ọ malitere mgbe onye isi Manchester City, nke dị ugbu a na Roma, gbadara na Sokratis Papastathopoulos na-esite na mpụga nke ndị iro ahụ. A kwaturu agbụ Grik ka ọ gbalịrị ịlụso bọl ahụ mgbagwoju anya na Dzeko, na-eme ka a gbanwee ọtụtụ ndị egwuregwu si n'akụkụ abụọ yana ndị ọrụ nchịkọta abụọ.
Dzeko, onye na-agbanye na kaadị edo edo, zitere ya site na onye nọnyee, Jonas Eriksson, ebe a na-enye Kyriakos Papadopoulos uhie uhie maka ịmalite ihe ndị na-ama jijiji mgbe mbụ ahụ mechara. Gris gara n'ihu nweta onye nhazi oge na oge nhụjuanya ya na ìgwè abụọ ahụ na-agbadatara ụmụ nwoke 10.
"M Enwere m kaadịadị uhie maka ihe kpatara ya, anaghị m kugbu a ihe mere," Dzeko kwuru mgbe e mesịrị. "Onye nchịkwa ahụ na-ekwu na m malitere ihe niile, ma ọ bụ naanị m na-agwụ n'ala, ya mere, olee otu m ga-esi malite ya?
O kwukwara, sị: "Ọ dị m ka enwere 3-0. Ndị Gris ekwesịghị ka a mata ya. Ọbụna na ha echeghị ihe efu 1-0, ha kwesiri ka ha kwụsị 4-0. "
Edin Dzeko Ụmụaka Akụkọ Karịa Ihe Ndị Na -Akpa Akụkọ
Nke a mere ọtụtụ fan iji gbanwee ngwa ngwa nsuso nsụgharị na ọdụ ụgbọelu na-achọpụta naanị iji mara ma ọ bụrụ na Edin Dzeko na-aga na London. Eleghi anya, ebe ọ na-aga, ka ọ bụrụ ebe dị na Surrey, ebe anyị nwere ike ịmara dịka Cobham, ebe a na-emekarị ọgwụ na ịdebanye aha na Chelsea. Ọ bụ Italy's Mediaset Premium channel nke mbụ bipụtara nke a ibe. Akụkọ ha na-agbakwụnye na nwanne ya nwaanyị na Dzeko tinyere ya na Silvano Martina.
Edin Dzeko Ụmụaka Akụkọ Karịa Ihe Ndị Na -Ọrụ na Nchịkọta
Džeko malitere ọrụ ya Agbeljezničar, na-egwuri egwu dị ka midfielder n'etiti 2003 na 2005, ma n'enweghi ọganihu na ọnọdụ ahụ. A na-ele ya anya dị ka ogologo, na enweghi ike ime ihe. Džeko si nchịkwa n'oge ahụ, Jiří Plíšek, hụrụ ikike ya na mgbe Plíšek laghachiri n'ụlọ, ọ gwara ụlọ ọrụ ọzọ, Teplice ịzụta nwata ahụ dara ogbenye.
Željezničar nabatara otu nnwere onwe nke € 25,000 maka Džeko, otu n'ime ndị nduzi nke Željezničar na-ekwu afọ ole na ole, "[Anyị] chere na anyị meriri lotiri ahụ". O nwere ihe nbinye ego ya na Ústí nad Labem na 2005, bụ mgbe o meriri ihe mgbaru ọsọ isii na egwuregwu 15. Mgbe afọ ahụ gasịrị, ọ laghachiri na Teplice, nọrọ ebe ahụ ruo 2007. Na ihe mgbaru ọsọ 13 na egwuregwu 30, ọ bụ ihe mgbaru ọsọ nke abụọ nke Czech League na oge 2006-07. N'ihi ọrụ ya, onye uweojii VfL Wolfsburg bụ Felix Magath dere ya maka nde 4. O meriri ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ na osisi. Nke a mere ka aha ya dịrị n'ahịa ndị mbụ na-ere ahịa.
Mgbe nkwenye siri ike, Roberto Mancini, onye njikwa nke Manchester City, kwadoro na 3 January 2011 na a kwadoro ego nke £ 27 nde (32 nde) na Wolfsburg maka Džeko, nke bụ obodo nke abụọ kasị elu nke obodo, Robinhonde £ 32.5 (nde 42.5) si na Real Madrid gaa 2008. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Edin Dzeko nke Ụmụaka na akụkọ ihe omuma nke ọma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Brahim Diaz Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ihe omuma
Ulo oru Europe334
Nwa Jose Mourinho bụ nwata nke akụkọ akụkọ na-enweghị isi